चिनियाँहरु किन खान्छन् साङ्लाको जुस ? |
चिनियाँहरु किन खान्छन् साङ्लाको जुस ?
कर्पोरेट नेपाल २२ आश्विन २०७५, सोमबार २२ आश्विन २०७५, सोमबार रोचक तथ्य
एजेन्सी । घर तथा कोठाभित्र र अझ भान्सामै साङ्ला देख्दा हामीलाई घिन लाग्छ । साङ्ला मार्नको लागि खर्च गरेर विभिन्न विषादीहरुको प्रयोग गर्छौं तर चीनमा भने मानिसहरुका लागि यहीँ साङ्ला कमाइको माध्यम बनिरहेको छ ।
सम्भावित औषधीय गुणका कारण चिनियाँ औषधि उद्योगहरुका लागि साङ्ला व्यवसायिक अवसरको रुपमा खडा भएको छ । चीन लगायतका केही एसियाली देशमा साङ्लालाई तेलमा तारेर खाने चलन पनि छ । अब चाहीँ चीनमा साङ्लाको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरिँदैछ । चीनको शिचांग सहरमा एक औषधि कम्पनीले हरेक वर्ष ६ सय करोड साङ्ला उत्पादन तथा पालन गर्दछ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार एक भवनमा साङ्ला पालन गरिएको छ । उक्त भवनको क्षेत्रफल झण्डै दुईवटा खेल मैदान जत्तिकै छ ।
नेपालमा औषधिको बजार रु ७० अर्ब पुग्यो, ५५ प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात
यहाँ चिहानबाट युवतीहरुको लास निकालेर विवाह गरिन्छ ।
बाणगंगा नदीको बगरमा तरबुजा उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी
डडेल्धुरा मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै
स्वयंवरको औँठी किन साइली औँलामा मात्र लगाइन्छ ?
पसीनाले हैन यस कारण आउछ शरीरबाट गन्ध